ကျွန်မကလေးကို ငါးကြီးဆီ( fish oil ) တိုက်ချင်လို့ – Burmese Baby
Web Master | July 25, 2017 | Articles, Health | Comments
မိတ်ဆွေတယောက်က ငါးကြီးဆီနှင့်ကလေးကျန်းမာရေးဆက်စပ်ပုံကို မေးလာသဖြင့် သြစတြေးလျနိုင်ငံ တော်ဝင်ကလေးဆေးရုံမှ အချက်အလက်များကို ကိုးကား၍ တင်ပြပါမည်။
🔹Omega-3(အိုမီဂါ-3) ဆိုတဲ့အဆီဓာတ်ပါ၏။ အိုမီဂါ-3 သည်ငါးနှင့်ပင်လယ်စာတို့မှရသည်။ မျက်လုံးနှင့်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အရေးပါသည်။
🔴ကလေးကို ငါးကြီးဆီဖြည့်စွက်အပိုတိုက်ရင် တကယ်အကျိုးရှိလား?
🔹ဆေးပညာမှာ တကယ်အကျိုးရှိလား। မရှိလားကို လုံလောက်သော သုတေသနပြုလုပ်ပြီးမှသာ ပြော၍ရပါသည်။ ကလေးနှင့်ငါးကြီးဆီ သုတေသနများ ရှိပါသည်။ သို့သော် လက်ရှိပြုလုပ်ထားသော သုတေသနများအရ အဖြေက ၂-မျိုး ထွက်နေပါသည်။ အကျိုးရှိ၏။ အကျိုးရှိသည်ကိုမတွေ့ရ။
🔹အာရုံစူးစိုက်မှုအလွန်နည်း၍ တက်ကြွလွန် (ADHD ) ဖြစ်နေသော ကလေးများသည် အခြားကလေးများထက်စာပါက သူတို့၏သွေးထဲတွင် အိုမီဂါ-၃ လျော့နည်းမှုအလားအလာ ပိုရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။ အိုမီဂါ-၃ လျော့နည်းသည့် လက္ခဏာများဖြစ်သည့် ခြောက်သွေ့သောဆံပင်। ခြောက်သွေ့သော အရေပြား। ရေငတ်လွန်ခြင်းများ ကို ADHD ကလေးများ၌ ပိုတွေ့ရတတ်သည်။ သုတေသန အချို့ကတော့ ADHD လေးများကို ငါးကြီးဆီ တိုက်လျှင် အာရုံစိုက်မှုအပိုင်း၌ တိုးးတက်မှု ရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။
– စာဖတ်ခြင်း၌ အခက်အခဲရှိနေသော ကလေးတွေမှာလည်း ငါးကြီးဆီ ပေးပါက တိုးတက်မှုရှိကြောင်း သုတေသနအချို့ကတွေ့ထားသည်။ အချို့သုတေသနတွေကတော့ တိုးတက်မှု မရှိပါဘူးဟု ဆိုသည်။
🔴သုတေသန အရ ဘာတွေမသိသေးဘူးလည်း?
🔹ADHD နဲ့ စာဖတ်ခက်ခဲနေသော ကလေးများကို ပေးလျှင် အကျိုးရှိကြောင်း( သုတေသန အားလုံးမဟုတ်သော်လည်း) တွေ့ထားပေမဲ့ အဲဒီပြဿနာတွေမရှိတဲ့ ကလေးတွေကို ငါးကြီးဆီ ဖြည့်စွက်တိုက်ရင် အကျိုးရှိလား। မရှိဘူးလားဆိုတာ မသိသေးပါ။ လူငယ်တွေ၌ လုပ်ထားသောသုတေသန တစ်ခုကတော့ အာရုံစူးစိုက်မှု၌ တိုးတက်မှုရှိသည်ဟုဆိုသည်။ ကလေးများ၌ ပြုလုပ်ထားသော သုတေသနတော့ မရှိပါ။
– သေချာတာကတော့ အဖြေတိတိကျကျရဖို့ သုတေသနတွေ ထပ်လုပ်ရပေဦးမည်။
🔴ငါးကြီးဆီဖြည့်စွက်တိုက်လျှင် ဆိုးကျိုးရော ရှိလား?
-အချို့ကလေးများအတွက် ငါးနံ့ မခံနိုင်၍ တိုက်ဖို့ခက်ပါလိမ့်မည်။ ပမာဏ များများးသောက်မိလျှင် ဗိုက်မအီမသာဖြစ်တတ်သည်။ တခြားဖြစ်နိုင်တာက ဝမ်းသွားခြင်း। လေချဉ် မကြာခဏ တက်ခြင်း। ပျို့ခြင်း। အရေပြားပေါ်၌ အနီ ကွက်များထွက်ခြင်း စသဖြင့်။
– သွေးကျဲ। သွေးမတိတ် ရောဂါရှိသော ကလေးများက ပမာဏများသော ငါးကြီးဆီ သောက်လျှင် သွေးယိုကောင်း ယိုနိုင်သည်။ ထိုကလေးများကို ဖြည့်စွက်ငါးကြီးဆီ မတိုက်သင့်ပါ။
-သွေးကျဲဆေးသောက်နေသော ကလေးများကိုလည်း မတိုက်သင့်ပါ။
-ADHD ရှိသောကလေးများ। စာဖတ်ရာ၌ ခက်ခဲမှု ပြဿနာ ရှိနေသော ကလေးများကို တိုက်နိုင်ပါသည်။ ငါးနှင့်ပင်လယ်စာ လုံးဝမစားသော ကလေးများကို တိုက်နိုင်ပါသည်။ ကျန်ကလေးများကတော့ မိဘသဘောသာဖြစ်ပါသည်။ တိုက်လျှင် အကျိုးရှိကောင်း ရှိနိုင်ပါသည်။
-တိုက်မည်ဆိုလျှင်လည်း ကလေးအတွက်ထုတ်ထားသော ဖြည့်စွက် ငါးကြီးဆီကိုသာ တိုက်ပါ။ လူကြီးအတွက်ထုတ်ထားသော ငါးကြီးဆီများ မတိုက်ပါနှင့်။ အချို့ကလေးအားဆေးများတွင် ငါးကြီးဆီ ထည့်ထားတတ်ပါသည်။
Ref: Royal Children Hospital, Melbourne, Australia